Ameerikaan qubattootni Israa'eel West Baanki keessaa seeraan ala jedhamuu hin qaban jette - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaan qubattootni Israa'eel West Baanki keessaa seeraan ala jedhamuu hin qaban jette
Goodayyaa suuraa Israa'eel buufata qubannaa 100 ol Jewuushotaaf West Baankii fi Baha Jerusaalemitti ijaarteetti.
Ameerikaan ejjennoo qubattoota West Baanki keessaa irratti qabdu jijjirtee, kana booda akka seera Idila adunyaatti seeraan ala jechuu hin qabnu jette.
Barreessaan Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Pompeyoo dhimma West Baanki irratti mari'achuu kan qabu Israa'eelii fi Paalestaayinidha jedhan.
Israa'eel yaadicha simatteetti. Ejjennoon Ameerikaa dhimma West Baanki irratti isa bara bulchiiinsa Obaamaa irraa jijjirameera.
Qubannichi bara 1967 bara waraana Baha Gidduugaleessaa Israa'eeliin raawwate. Laficha qabattee kan turte Israa'el ture.
Ergasii waggoota dheeraaf madda walitti bu'insa hawaasa idila adunyaa fi Israa'eel akkasumas Paalestaayin tahuun tureera.
Guwaatimaalaan Imbaasiishee gara Jerusaaleem geessuufi
UN ejjennoo Tiraampi Jerusaalem irratti qaban kuffise
Erga eeggannoodhaan falmii seeraa hunda xiinxallee ilaallee'' jedhan Poompeyoon '' Ameerikaan qubannaan Israa'eel lammiilee ishee naannichatti taasifte seera idila adunyaa waliin kan wal falleesu miti,'' jedhan.
''Qubannaa hawwaasa Israa'el kana seeraa Idila adunyaan ala jechuun hin milkoofne. Nageenyas buusu hin dandeenye,'' jedhan.
Mariisisaa ol-aanaan gama Paalestaayin Saayeb Erekaat murtoon Ameerikaa nageenya fi tasgabbii adunyaa kanaaf rakkoodha jedhee ''seera idila adunyaa kana seera bosonaa [the law of the jungle] yknseera inni humna qabu qofti mo'ee jiraatuun bakka buusuudha jedhan.
Ministirri Muummee Israa'eel Beenaayim Netaneyuu ejjennoo isaanii jijjiiruun'' dogogora seenaa qajeelche'' jedhanii biyyootni kaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu akka qaban waamicha taasisan.
West Baankii fi Baha Jeerusaalem bakkeewwan 140 keessa Israa'eel manneetii jireenyaa ijaaruun namoota 600,000 qbachiisuun jiraachaa jiru. Akka seera idila adunyaattis seeraan ala jedhamuun biyyootni lamaan Israa'eelii fi Paalestaayinis bakka kana irratti hanga ammaatti wal dhabaa turaniiru.